VaTsvangirai Vanoti Vacharamba Vachirwira Hutongo hweJekerere
HARARE — Mutungamiri weMDC huru, Va Morgan Tsvangirai, vanoti kunyange hazvo Zanu PF yakabirira musarudzo dzemusi wa 31 Chikunguru, vacharamba vachirwira hutongi hwejekerere munyika uye vachasvitsa nyaya yekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo kusangano renyika dzepasi rose re United Nations.
Vachitura mashoko avo ekupera kwegore pamwe nezororo rekisimusi kuvatori venhau neChishanu pamuzinda webato ravo pa Harvest House mu Harare, Va Tsvangirai vati kunyange hazvo sarudzo dzemusi wa 31 Chikunguru dzisina kufamba zvakanaka, vacharamba vachiedza napose pavanogona napo kuti munyika muve nehutongi hwejekerere.
Va Tsvangirai vati kunyange sarudzo dzakabirirwa pachishandiswa kambani ye ku Israel ye Nikuv, vane humbowo hwekuti sarudzo idzi dzakanyanyoshandiswa vari muchiuto kuti dzibirirwe. Vati vachasvitsa nyaya iyi kumasangano akaita se SADC, African Union pamwe ne United Nations.
Kunyange hazvo kuchine dzimwe nyaya dzakakwidza kudare repamusoro ne MDC-T ichigunu’una kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka, Va Tsvangirai vati vave nehumbowo hwekuti komisheni inowona nezvekufambiswa kwesarudzo, ye Zimbabwe Electoral Commission, haisisina mapepa akashandiswa pakuvhota kunyange nyaya idzi dzisati dzapera kunzwikwa mumatare.
Va Tsvangirai vati chiri kudiwa isarudzo itsva dzinoitwa zviri pachena vachiti kukunda kwakaita Va Robert Mugabe nebato ravo re ZANU PF hakurevi chinhu kana veruzhinji.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa divi re Zimbabwe Electoral Commission panguva iyo taenda pamhepo.
Va Tsvangirai vatora mukana uyu kushorawo bhajeti rakaturwa negurukota rezvemari, Va Patrick Chinamasa, neChina muparamende vachiti harina zvarinazvo zvinoita kuti hupfumi hwenyika husimukire.
Asi VaChinamasa vanoti bhajeti ravo rakanangana nekusimudzira hupfumi hwenyika, uye varisira kuti hupfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvinodarika zvitanhatu kubva muzana gore rinouya.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri weZanu PF, VaRugare Gumbo, pamashoko ataurwa naVaTsvangirai.
Asi vachitaura pamusangano wepagore webato ravo muChinhoyi svondo rapera, VaMugabe vakati kukunda kwavakaita bato ravo sarudzo kunoreva kuti MDC yafa zvachose.
VaMugabe vanotiwo vakakunda musarudzo idzi nokuti bato ravo rine gwara rinotambirwa neveruzhinji muZimbabwe.